Beenishaangul Gumuzitti Araarri Bufne Jedha Mootummaan! Hidhattoonnoo Maal jedhu? – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsBeenishaangul Gumuzitti Araarri Bufne Jedha Mootummaan! Hidhattoonnoo Maal jedhu?
Beenishaangul Gumuzitti Araarri Bufne Jedha Mootummaan!
Hidhattoonnoo Maal jedhu?
Icciitiin Araara Godina Matakkalii fi Bakkeewwan Biroo Akka Armaan Gadiiti.
Mootummaan Itoophiyaa diraamaa afaan fajjiin uummata gowwoomsuu akkuma itti fufetti jira. Inni godina Matakkalii fi naannolee Beenishaangul Gumuuz bakkeewwan tokko tokkotti walii galtee araaraa hidhattoota waliin mallatteessuun gara tasbabbiitti dhufne jedhee kan inni karaa miidiyaa afarsu soba fudhatama hin qabnedha.
Ji’a Caamsaa keessa araraa buusna maqaa jedhuun tuuta mataa isaa walitti kan qabate mootummaan araarichii fi namoonni inni walii galtee mallatteesse bakka nun bu’an jechuun ajajaan itti aanaa riphee lolaa Beenishaangul Gumuuz Obbo Zalaalam dubbatan.
Haaluma wal fakkaatuun mootummaan nama riphee lolaa bakka hin buune dabballee mataa isaa harka lafa jalaan qopheessee araraaf kan qopheesse hidhattoonni fudhatama dhabsiisuun dubbicha harkatti kufaa godhan.
Araaraaf kan mootummaan filatee bakka buufate namni Gaaginammawu Shimgilii hidhattonni bakka nun bu’u jechuun namoota inni qindeessee araaraaf qopheesse 40 godina Matakkal Aanaa Wanbaraa keessatti tarkaanfii irratti fudhachuun ajjeesan.
Gaaginammawu kaadiree fi dabballee mootummaati malee hidhattootas bakka nun bu’u jechuun dubbichas busheessaniiru. Hidhattoota inni walitti qabee mootummaaf dhiheesses murna kashalabbee akka isaati. Nuti waan baaneef beekna, waan keenya kadhaan osoo hin taane hojjennee arganna jechuun itti aanaan hooggana riphee lolaa naannichaa Obbo Zalaalem dubbataniiru. Zalaalem hooggana muraasaa kan turanii fi leenjisaa gumuzaa fi Dogonaa kan turan amma gara hooggana itti aanaatti ol siqaniiru. Araarri godina Matakkalitti ta’e jedhamu tasumaa bakka nun buutu, warra maqaa keenyaan daldalaniif ammas gatii isaanii nii laannaaf jedhaniiru!
Hidhattoonni kun uummata baadiyyaa irraa gurmeeffachuun ammallee humna isaanii jabeeffachaa akka jiran dubbataniruu.